I-Agaro Oligosaccharide Fujian Global Ocean Biotechnology I-Agaro-oligosaccharide inezinto ezizodwa zebhayoloji, ezinjenge-anti-oxidation, anti-ukudumba, intsholongwane kunye nokuthintela isifo sokukrala kwebele, njl. kumgangatho kazwelonke kunye ne-EU. I-Fujian Global Ocean Biotechnology I-Agaro-oligosaccharide luhlobo lwe-oligose kunye nenqanaba le-polymerization (DP) ye-2 ~ 12 emva kwe-hydrolysis, ene-vis ephantsi ...
I-Agarose yipolymer yomgama enesiseko esisisiseko setyathanga elide lokutshintsha i-1, 3-edityaniswe ne-β-D-galactose kunye ne-1, 4 edityaniswe ne-3, 6-anhydro-α-L-galactose. I-Agarose inyibilika ngokubanzi emanzini xa ifudunyezwe ngaphezulu kwe-90 ℃, kwaye yenza i-gel elungileyo eqinileyo xa iqondo lobushushu lehla laya kwi-35-40 ℃, eyona nto iphambili kunye nesiseko sokusetyenziswa kwayo okuninzi. Iipropathi zejeli ye-agarose zihlala zichazwa ngokwamandla e-gel. Ukuphakama kwamandla, ngcono ukusebenza kwejeli. I-agarose echanekileyo ilungile ...
Isulungekisiwe iCarrageenan Fujian Global Ocean kappa carrageenan ilungiselelwe ikakhulu kubomvu i-algae- i-Eucheuma, ukusuka kwi-ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulphate kunye ne-β (1-4) 3,6-dehydration-D half Partial sulfate group composition yelactose. Imveliso iqhutyelwe ngokwenzululwazi kwaye umgangatho wemveliso uhambelana ngokupheleleyo nemigangatho yesizwe yase-China kunye ne-EU. Iimpawu zekhemikhali ● Ukunyibilika: unganyibiliki emanzini abandayo, kodwa ungadumba ungene kwibhloko yeglu, ungenakunyibilika kwizinyibilikisi eziphilayo, i-eas ...
Imilo ecokisekileyo yeCarrageenan
I-Fujian Global Ocean kappa carrageenan ilungiselelwe ikakhulu i-algae ebomvu-i-Eucheuma, ukusuka kwi-ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulphate kunye ne-β (1-4) i-3,6-dehydration-D isiqingatha seqela lesalphate yeqela le-lactose . Imveliso iqhutyelwe ngokwenzululwazi kwaye umgangatho wemveliso uhambelana ngokupheleleyo nemigangatho yesizwe yase-China kunye ne-EU. Iimpawu zeMichiza